पुरुष फुटबलमा नेपालले जित्यो स्वर्ण – " कञ्चनजंगा News "
No Comments on पुरुष फुटबलमा नेपालले जित्यो स्वर्ण
२४ मंसिर, काठमाडौं । भुटानलाई हराउँदै नेपालले १३औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) अन्तरगत पुरुष फुटबलको स्वर्ण नेपालले जितेको छ । साग फुटबलमा नेपालको यो लगातार दोस्रो पटक उपाधि हो भने समग्रमा चौथो ।
मंगलबार भएको फाइनल भिडन्तमा नेपालले भुटानलाई २-१ गोल अन्तरले हराएको हो ।
त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रंगशालामा भएको खेलमा नेपालले १७ औं मिनेटमा अभिषेक रिजालको गोलबाट अग्रता लिएको थियो । तर ३७ औं मिनेटमा चेन्चो ग्याल्सेनले बराबरी गोल फर्काए ।
अभियक्तको श्रीमतीसंग घुस लिएका दोलखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी निलम्बित
काठमाडौं, २४ मंसिर । दोलखाका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्रप्रसाद रिजाल निलम्बित भएका छन् । अभियुक्तलाई धरौटीमा रिहा गर्न घुस लिएको अभियोगमा अनुसन्धानमा रहेका उनलाई निलम्बन गरिएको हो । दोलखाका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी उपसचिव खगेन्द्रप्रसाद रिजालले आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्रका मुद्दाका अभियुक्तसंग घुस लिएको अभियोग लगाइएको छ । उनले अभियुक्तसंग धरौटीमा रिहा गर्न भन्दै क्षेत्राधिकार भन्दा धेरे घुस लिएका थिए । उनलाई अनुसन्धान भइरहेको जनाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मंगलबारको सिफारिसअनुसार गृह मन्त्रालयले निलम्बन गरेको हो।
जनप्रतिनिधिलाई कु ट पिट गरेको अभियोगमा प्रहरी हिरा सतमा रहेका श्रीमानलाई छुटाउन भन्दै महिलाले प्रजिअ रिजाललाई घुस दिएकी थिइन् । उनले धरौटीका लागि भन्दै महिलासंग एक लाख रुपैया लिएका थिए । थु नछे कको बहस पछि प्रजिअले एक लाख रुपैया मागेपछि उनले ऋणधन गरेर पैसा दिएकी थिइन् ।
सोही घट नामा दोलखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कार वाही स्वरुप गृहमन्त्रालय तानिएका थिए । अभियुक्तका परिवारबाट घुस लिएको विषयमा विवा दमा परेपछि दोलखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्रप्रसाद रिजाल गृह मन्त्रालय तानिएका थिए । उनले रकमका लिइसके पछि पीडितसंग दिएको स्पष्टिकरणको भिडियो समेत बाहिरिएको छ ।
प्रहरी हिरा सतमा रहेका ब्यक्तिको मु द्दा मिलाइदिने भन्दै पीडितको परिवारसंग एक लाख रुपैया लिएको देखिएपछि उनी विवा दमा परेका हुन् । दोलखाको मैलुङ ४ का कुमार लामा मोक्तान जनप्रतिनिधि कु टेको अभियोगमा २४ दिनदेखि प्रहरी हिरा सतमा थिए। उनको श्रीमतीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई रकम दिएकी हुन् ।
गत मंगलवार उनलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय दोलखा पुर्याइएपछि थुनछेक बहस पछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले एक लाख रुपैया मागेको मोक्तानकी श्रीमतीले बताइन् ।
कुमारकी श्रीमती रेणु तामाङले ऋणधन गरेर जम्मा पारेको पैसा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएकी थिइन् । ‘सिडिओले एक लाख रूपैयाँ नभए आठ, नौ वर्ष जे ल हालिदिने भनेर चेता वनी दिएपछि उनले ऋण खोजेर पैसा जुटाएको बताइन् । ‘पैसा कम गरिदिनू भन्दा पनि प्रजिअले आफुलाई थर्का एको उनले बताइन् ।
प्रजिअ रिजालले मुद्दा शाखाबाट बिल लैजानू भने पछि रेणु रसिद लिएर घर फर्किइन्। श्रीमान हिरासतवाट छुटिसकेपछि रसिद हेर्दा रसिदमा १० हजार रुपैया मात्र लेखिएको देपछि उनी स्थानिय पत्रकार सहित लिएर प्रमुख जिल्ला अधिकारीकहाँ पुगिन् । पैसा फिर्ता लिन गएका रेणुलाई उनले क्वाटरमा लगेर ९० हजार रुपैया फिर्ता दिएका छन् ।
कालिन्चोक गाउँपालिका(१ का उदिम तामाङ र इन्द्रबहादुर तामाङबाट पनि सिडिओले १४ हजारको रसिद दिएर ३५ हजार रुपैयाँ लिएको भन्दै पुगेका थिए।
दुई भिन्न मुद्दाका तीन अभियुक्तसँग रिजालले बुधबार एक लाख ११ हजार रुपैयाँ ‘घुस’ लिएको देखिए पछि उनी कार वाहीमा परेका हुन् । उनले एक लाख रूपैयाँ मागेर दश हजारको मात्रै रसिद दिएका थिए भने ३५ हजार मागेर १४ हजार रूपैंयाको मात्रै रसिद दिएका थिए। जिल्ला प्रशासन कार्यालय दोलखाका अनुसार रिजाल आफूले चलाउने सरकारी टेलिफोन नम्बर सहायक सिडिओलाई दिनू भन्दै शुक्रबार मध्यान्ह काठमाडौंका लागि हिँडेका थिए ।
← नेपालले भुटानविरूद्ध लियो २-१ को अग्रता, रंगशालामा हजारौँ दर्शको साथ हुँदा नेपाली खेलाडी जोसका साथ खेल्दै → के बिराज भट्ट साँच्चै ‘धनगढीको डन’ हो ? बिराजले फिल्म क्षेत्रमा आउनु अगाडि थुप्रै मान्छे पिटेको खुलाशा तर किन ? (भिडियो हेर्नुस)